Shaqo ka fariisi laga baaqsadey inuu bilowdo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Eugene Hoshiko/Scanpix.
Shaqo ka fariisi laga baaqsadey inuu bilowdo
Su'aasha ugu muhiimsanayd waxay ahayd xaaladda bayada ee goobta shaqada
La cusbooneeyay tisdag 2 april 2013 kl 09.49
La daabacay tisdag 2 april 2013 kl 09.14
Waxaa laga baaqsadey cabsi laga qabey shaqa ka fariisi la filayey inuu maanta bilowdo. Iyadoona ey xalay fiidnimadii shan saacadood dabadeed oo uu wada-hadal u socdey garabyada ururka shaqaalaha iyo shaqa-bixiyaha ey aqbaleen fikirkii uu soo dhex dhigay guddigii waanwaanta ka dhex waday labada garab.
– Ururka shaqaalaha ee dhismaha ayaa ogolaansho ku siiyey fikirkii uu soo jeediyay guddiga dhexdhexaadintu. Waa fikir miisaaman oo dhexdhexaad ka noqonaya labada garab ee suuqa shaqada. Iminka waxaa lagu tallaaba-san karaa tallaabooyin horey loo qaado sidii wax looga qaban lahaa howlaha ugu muhiimsan ee shaqaalaha dhismaha. Waana mid aan ku farax-sanahay inaan heshiis guud wada gaarno. Ma ahan wax loo baahan yahay in lagu sugnaado un is-qabqabsi sii daba dheeraada, sida uu sheegay Ola Månsson, agaasimaha guud ee ururka warshadaha dhismooyinka.
Su’aasha ugu ballaaran ee la isku mari la’aa sanaadka wada-hadalkii labada garab ee suuqa shaqada ee dhismaha ayaan ahayn midda la xiriirta mushaarooyinka shaqaalaha, hase yeeshee ku saabsanayd xaaladda bayada ee goobaha shaqada.
Iyadoona uu ururka shaqaaluhu ku guuleeystay shuruuddiisii ahayd cidda masuuliyadda ka noqon doonta hoowlaha bayada ee goobaha shaqada – iyadoona lagu heshiiyey in shirkadda haysa qandaraaska ugu weyn ee goob dhismo ay masuuliyad ka qaadi doonto in shirkadaha yaryar ee kale u hoggaan-samaan xeerarka guud ee xuquuqda shaqaalaha.
Waa howl kor-meer lagu sameeyn doono iyo sidii loo hor-marin lahaa xiriirka shirkadaha heysta qandaraaska iyo cidda ka dalbatay. Hogaamiyaha ururka shaqaalaha ee dhismaha Johan Lindholm ayaa sheegay inuu aad ugu qanac-san yahay heshiiska ey labada garab wada gaareen:
– Waxaan qabaa in qaar badan ee ka mid ah shaqaalaha dhismuhu ey neeftu ka soo baxdey. Waxaa noo suurtagashay heshiis horay uga jiray waddammada aan deriska nahey. Waxaan aamin-sannahey inaan tallaabo wax ku ool ah horay u qaadney, iyadoona wada-jir loo gaarey heshiis xadeeyneya bayada goobaha shaqada. Muddo ayay qaadatay hase yeeshee iminka waxaannu gaarney goolikii aan hiigsaneyney, sida uu sheegay.